Ukuthuthukiswa Komkhiqizo - Chapman Technology Co., Ltd.
Ngo- UMenzi weChapman, Siyaqonda ukuncintisana kobuso bomlingani wethu webhizinisi ezimbonini eziningi. Abalingani bethu bebhizinisi bathembele eqenjini lethu lobunjiniyela elinolwazi cishe iminyaka engamashumi amahlanu ukuxhasa izinzuzo zabo zokuncintisana.
Sigxila ekuxhumaneni okuqhubekayo kuyo yonke inqubo, kufaka phakathi isigaba sokwakhiwa, ukuqinisekisa ukuthi isicelo sozakwethu bebhizinisi siyaphumelela. Umphathi wohlelo ozinikele wabelwa iphrojekthi ngayinye. Ngemibono yabalingani, ithimba lethu lobuchwepheshe linganikeza ukwakhiwa nokuthuthukiswa kwalo lonke isakhiwo somkhiqizo nohlelo lokufaka isicelo. Lokhu kuqinisekisa abalingani bethu izinga eliphakeme kakhulu lekhwalithi, ukusebenza kahle kanye nokusebenza kahle kwezindleko kwengxenye ngayinye eyenziwe.
Ithimba lethu likholelwa ukuthi zonke izigaba ekwakhiweni nasekukhiqizeni uhlelo lokusebenza zibalulekile. Sisebenza ngokubambisana nabalingani bethu bebhizinisi ukuqinisekisa impumelelo esigabeni ngasinye. Ukulalela kwethu ekuthuthukisweni komkhiqizo, ukuklanywa kokukhiqizwa nokusetshenziswa kokugeleza kwesikhunta ukuhlaziya nokwenza izincomo zokuklama kunikeza abalingani bethu bebhizinisi onqenqemeni lokuncintisana kusukela ekuqaleni.
Sisebenze namakhasimende ukuthuthukisa imikhiqizo kweminye yale mikhakha elandelayo:
2. Ukuhamba / Ukufinyeleleka
3. Impilo / Ukuphila Kahle
4. Amathuluzi Wezimboni
5. Imishini Yezimboni
Isinyathelo sokuqala: Umbono - Iphrojekthi iqala ngombono wakho womkhiqizo. Masikusize uchaze ukusebenza kwayo okubalulekile futhi ubone ngeso lengqondo indlela ezosebenza kangcono emakethe yakho ehlosiwe. Sizobeka uphawu lokulinganisa futhi sicabangele ukuhlola impahla ekhona yengqondo.
Isinyathelo sesibili: Ukuphenya Okuningiliziwe- Ngenkathi sinquma i-ID yomkhiqizo omusha, ithimba lethu lokumaketha ibhizinisi lidinga ukwenza ucwaningo lwemakethe ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu uhlangabezana nokuma kwamanje kwezimakethe kanye nesidingo semakethe. Ngokwemiphumela yokuhlaziywa kwethu kwemakethe, sizokwengeza futhi sithuthukise ukwakhiwa komkhiqizo, imisebenzi, futhi sivumele imikhiqizo yethu ukuthi ingene emakethe ngokushesha ukuze ithengiswe.
Isinyathelo sesithathu:Idizayini - Ukwenza umkhiqizo omuhle kakhulu kumodeli yebhizinisi lakho, kuzodingeka sisebenzise indlela yokwakha-yokwakha (i-DFM) ukuze umkhiqizo ukwazi ukusebenza kahle ngangokunokwenzeka. Imiqondo iyakheka ezinhlelweni zethu zokumodela ze-3D, futhi singenza izinqumo mayelana nezici, ifomu factor, nezinto zokwakha. Sizovumelana ngendlela enengqondo kunazo zonke yokuya phambili komkhiqizo wakho ngaphambi kokudlulela esigabeni sokwakha.
Isinyathelo sesine:I-prototype - Esikhungweni sethu esihlome ngokuphelele, singasika, sigaye, senze, ukuphrinta kwe-3D, ucingo, futhi sihlele ingxenye ngayinye nengxenye ngaphambi kokuhlanganisa uhlobo lwakho. Isigaba se-prototyping singaphinda njengoba imiklamo ehlukile ibhekwa futhi ihlolwe.
Isinyathelo sesihlanu:Ukukhiqiza - Njengochwepheshe kwezokukhiqiza, ezokuzenzakalela nezinqubo zezimboni, sikusiza ukuklama umkhiqizo wakho unokala engqondweni ukusebenzisa amathuba okonga phansi komgwaqo. Amandla ethu angaphakathi asivumela ukuthi sifeze amanye ama-run.
Isinyathelo sesithupha:Ukulethwa - Isizukulwane sokuqala somkhiqizo wakho sikulungele ukukhiqizwa nokumakethwa. Uzoba nephakethe lokuklama eliphelele, ama-prototypes, futhi nokugijima okuncane esitokweni. Futhi uzoba nokuxhaswa kwethu njengoba uhamba ezinyathelweni ezilandelayo.
Kubalulekile ukuhlola ikesi lebhizinisi kanye "nenani lebhizinisi" lapho wenza umkhiqizo. Ithimba lethu lizokusiza ngemfihlo ukuthi lihlole ukwenzeka ngokushesha futhi likuqondise ekuhlaziyweni kwenkinga inkinga yakho ehlose ukuyixazulula.